Ọkachamara Semalt: Ihe mere Afọ Ọhụụ Na-apụghị Dịchie SEO
N'oge na-adịbeghị anya, ọ ghọwo ụzọ a na-ahụkarị na ọ bụrụhaala na ị dị mmaọdịnaya, ndị ọzọ ga-elekọta onwe ya. O bu eziokwu na SEO na ahia ahia di na ya di mkpamaka SEO. Otú ọ dị, maka mgbasa ozi nyochacha ihe ịga nke ọma, ị ga-achọ ihe karịrị nnọọ ọdịnaya dị mma.
Onye Nlekọta Ọrụ Ndị Ahịa nke Ọkachamara Ọrụ Ntanetị, Nik Chaykovskiy na - akọwa ihe mere ọdịnaya ọdịnaya anaghị ezuru iji rụọ ọrụ SEO n'ụzọ dị irè.
Na tiori, echiche ahụ ziri ezi. All search engines na-agbalị inyendị ọrụ ha 'nwere ihe kachasị mma ma ha nwere algorithms nke na-ebuli elu ọdịnaya dị elu. Site n'inwekwu ọdịnaya, ị nwere ikenwekwuo isiokwu ndị na-edepụta aha ga-ekpuchi ọtụtụ arịrịọ nchọta. Ọzọkwa, ọ bụrụhaala na ọdịnaya dị mma, ọtụtụ ndị ọrụ ga-eletagị na saịtị.
N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na inweghị ihe ọ bụla ma ọlị, ị gaghị eguzoohere nke inwe oru oma SEO. Ọ bụrụ na ihe ahụ dara ogbenye na enweghị ntụkwasị obi, ihe ga-esi na ya pụta yiri nke ahụ. Ka ọdịnaya gị dị mma,ọ ghaghị ịgbaso ọtụtụ ụkpụrụ iji gosi na ọ dị mma. Nke a sitere na ịpụ iche maka ihe bara uru, mkpa na ntụrụndụ.
Ka anyị chee na ọdịnaya gị dị mma ma na i mepụta ọdịnayana mgbe nile..Njirimara a abaghị uru ma ọ bụrụ na anaghị ahụ anya. Ọ bụrụ na ndị ọrụ gị amaghị banyere ọrụ gị, ha enweghị ikegụọ ma ọ bụ lee ya. Site na ọganihu Google, ọ ka na-adabere na nzaghachi nke ndị ọrụ ya iji nyere ogo ogo ọdịnaya. N'ihi ya,ọ bụrụ na ndị ọrụ a enweghị ike ile ọrụ gị anya, Google enweghị ike ikpebi ogo ọdịnaya gị.
A na-enye ọtụtụ nzaghachi a site na mbak na njikọ,nke Google weere dị ka onye a pụrụ ịtụkwasị obi. Site n'inweta ọtụtụ njikọ, enwere ike ịhụ gị dịka ihe dị mma nke ọdịnaya ma dị ka a rụpụtara, ị gaebili na nchọta ọchụchọ. Otú ọ dị, njikọ ndị a adịghị enweta site na ọdịnaya dị mma. Ị ghaghị ibute ụzọ site n'ịkwalite naịkwado njikọ gị, mgbe ụfọdụ site na ịmepụta ụfọdụ njikọ njikọta.
Inwe ezigbo obi ụtọ na saịtị gị bụ mmalite dị mma. Otú ọ dị, ị kwesịrịechefula ihe ọ bụla dị mkpa maka saịtị gị iji bulie elu na nchọta search engines. Imirikiti saịtị template, dikaWụnye WordPress na Wix site na nhazi nke ọhụụ nke na-eme ka ọ dịkwuo mfe iji nyocha ọchụchọ.
Otú ọ dị, nke a ezughị oke. Ị ga-achọ ịmepụta data Metana mkpado aha, melite nchekwa nke ebe gi, megharia faịlụ robits.txt, mepụta ma melite ihumap uta ma mee ka ngwa ngwa nkesaịtị gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka saịtị gị nọ na-alụ ọgụ.
Ị nwere ike ịnweta ezi ike nke ọdịnaya ma ọ bụrụ na i nwere ikejikọta ya na ọtụtụ ahịa ahịa ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike iji ahịa ahịa email na mgbasa ozi mgbasa ozi ọha na ezeuru nke ọdịnaya gị. Site na iji usoro ndi a na ibe ya, iguzo n 'ohere kacha mma iji were otutu nke giọdịnaya. SEO bụ atụmatụ dị mgbagwoju anya. A pụghị idozi ya na otu elele anya Source .